हुरीपीडित साढे ३ सय घाइते अझै अस्पतालमा, विभिन्न अस्पतालबाट दर्जन चिकित्सक टोली प्रभावित क्षेत्रमा – Health Post Nepal
२०७५ चैत १८ गते १९:१९
आइतबारको विनाशकारी हावाहुरीका कारण घाइते भएका बारा र पर्साका बिरामीको उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालहरूमा चिकित्सकको अभाव भएपछि देशका विभिन्न अस्पतालबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका करिब एक दर्जन टोली प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । पछिल्लोपटक चितवनबाट चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरिएको छ । चितवन मेडिकल कलेजबाट ३५ जना चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली प्रभावित क्षेत्रतर्फ जान लागेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले प्राथमिक उपचारका सामग्री र औषधिसमेत लैजाने भएका छन् । यसअघि, सोमबार नै काठमाडौंबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको ३ टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सोमबार बिहान डा. रमेश खरेलको नेतृत्वमा ३ जनाको चिकित्सक टोली हावाहुरीप्रभावित क्षेत्रमा पुगेको थियो । त्यस्तै, सोमबार नै डा. दीपेन्द्ररमण सिंह नेतृत्वको ३ चिकित्सकको टोली र डा. विवेककुमार लाल नेतृत्वको २ सदस्यीय चिकित्सक टोली घटनास्थल पुगेका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालका २ टोली र सैनिक अस्पताल, हेटौँडा अस्पताल, जनकपुर अस्पताल र मेडिसिडी अस्पतालका छुट्टाछुट्टै चिकित्सक अन्य स्वास्थ्यकर्मीसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । त्यसैगरी, थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले पनि घटनास्थलमा चिकित्सकको टोली खटाउन मन्त्रालयसित अनुमति लिएको र जाने तयारीमा रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय साढे ३ सयको हाराहारीमा घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तीमध्ये केही बिरामीलाई शल्यक्रिया आवश्यक भएको उनले जानकारी दिए ।